निरोगी बन्नु छ भने महलाई यसरी खानुस् « Lokpath
निरोगी बन्नु छ भने महलाई यसरी खानुस्
अरू महिनाको तुलनामा वर्षा महिनामा यो यो कुरा खान हुन्छ, यो यो कुरा खानु हुँदैन भन्ने धेरै किसिमका भनाइहरू देखा पर्ने गर्छ । अझ साउन महिनामा त यस्ता खान हुने र खान नहुने कुराहरूको फेहरिस्त लामै हुने गर्छ ।
वर्षा महिनामा कोही दूध दही खान हुदैंन भन्छन् भने कोही हरियो साग खान हुँदैन भन्छन् । त्यसैले वर्षा महिनामा के खान हुन्छ र के खानै पर्छ भन्ने विषयमा भने जो कोहीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्दैनन् ।
हामी तपाईँलाई वर्षा महिनामा के खानेकुरा अनिवार्य रूपमा खानु पर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिदैं छौँ । यस्ता खानेकुरा बच्चा देखि बृद्धबृद्धासम्मलाई अनिवार्य रूपमा खुवाउने हो भने उनीहरूलाई वर्षा मौसममा हुने धेरै किसिमका रोगहरूबाट बचाउन समेत सकिन्छ ।
वर्षा महिनामा तपाईँले जे जस्तो किसिमको खानेकुरा खाए पनि महलाई भने अनिवार्य रूपमा खाने गर्नुपर्छ । आयुर्वेदमा पनि महका धेरै गुणहरू व्याख्या गरिएको छ ।
बजारमा सजिलै पाइने र वर्षा मौसममा निकै नै प्रभावकारी मानिने महलाई बिशेषत वर्षा मौसममा सेवन गर्दा यस्तो किसिमको फाइदाहरू गर्छ ।
मह खाँदा शरीरलाई यस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ
– महको नियमित सेवनले रोग प्रतिरोधी क्षमताको वृद्धि गर्छ ।
– महको नियमित सेवनले शरीर भित्रका विकारहरूलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
– महको नियमित सेवनले आँखाको ज्योतिलाई सकभर कमजोर हुन दिँदैन ।
– महको सेवनले कब्जियतको समस्या समाधान हुन्छ ।
– घाँटीमा कुनै किसिमको समस्या छ भने त्यसलाई हटाउन महको सेवन उत्तम मानिन्छ ।
– थकान र कमजोरी हुन्छ भने महको नियमित सेवन गर्नुपर्छ ।
– अनिन्द्राको समस्यालाई महको सेवनले हटाउने गर्छ ।
– महको सेवनले खोकी र ज्वरो हुन दिँदैन ।
– मांसपेशीमा हुने थकान र मांसपेशी बटारिने समस्या कम हुन्छ ।
– पाचन क्रियालाई राम्रो गर्छ ।
महलाई यसरी खान सकिन्छ
– बिहान मन तातो पानीमा एक चम्चा मह मिलाएर खान सकिन्छ ।
– दुई चम्चा महमा एक चम्चा अदुवाको रस मिलाएर सेवन गर्न सकिन्छ ।
– मनतातो दूधमा एक चम्चा मह मिसाएर नियमित सेवन गर्न सकिन्छ ।
– दैनिक १–२ चम्चा मह खान पनि सकिन्छ ।
– मनतातो पानीमा कागतीको रसमा मह मिसाएर पिउन सकिन्छ ।
महमा के कस्तो किसिमको पौष्टिक तत्त्व हुन्छ ?
महमा एन्टि ब्याक्टेरियल र एन्टिसेप्टिक गुण हुन्छ । महमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन ए, बी, सी, जिङ्क, कपर, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियम र सोडियम जस्ता पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ । यस्ता पौष्टिक तत्त्वले शरीरलाई राम्रो गर्ने गर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,१६,शनिवार ०५:३०
#रोग प्रतिरोधी क्षमता
अल्जाइमर रोग किन हुन्छ र यसबाट कसरी बच्ने ?
आज विश्व अल्जाइमर दिवस । प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर २१ तारिखलाई विश्व अल्जाइमर दिवसको रूपमा मनाइदैं आइएको छ । यो वर्ष
नियमित व्यायाम गर्नुहुन्छ र ‘उमालेको अण्डा डाइट’लाई अपनाउनुभएको छ ? यसको केही नराम्रा साइडइफेक्ट पनि छन्
अधिकांशमा एउटा भ्रम देख्छु म, कि तौल कम गर्नका लागि उमालेको अण्डा शरीरको तौल कम गर्न उपयोगी डाइट हो ।